Horukon yakaderera-yakatarwa inoti, ona nenzira nenguva
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Horukon yakaderera-yakatarwa inoti, ona nenzira nenguva
Mune makombiyuta, uye okutengesa yakatarwa, ndiye horo conserver kubatwa ndechokuti anogona kudzora payout. Somunhu mudariro yokuziva chikamu ari payout, mukuru-yakatarwa, pakati ezvinhu, zvinonzi pasi pazviruva vari. In, kutanga kuti rikaitika yakaderera marongero kana uchida kuziva pachine nguva, tichakurukura kuti pane chakadaro chinhu chakadai. Low marongero nokuti pane zvakawanda pamusoro pfungwa kuti sezvo zvikuru kuona kuburikidza nyore nomupirista marongero.
Somuenzaniso, hauchafambi kuuya zvakajairika kuwana, uye kazhinji kuuya asvike kunyange mapfupi kushanda maawa, kuti kazhinji nyore kubvisa vakurukurirane Atsurichi, kusvika nemuenzaniso chinhu kutsvetera kunogona kuonekwa chete zvimwechete uyewo kuvimbika pakarepo pasi kure kuti ataure jackpot, zvichava kuonekwa pfungwa dzakawanda chokuita kuwana migumisiro. Kana ukatarira seizvi, rakadzika marongero Kazhinji akafanana riri kuuya kuramba kuti pfungwa kuti rinogona kutsunga muchidimbu chokuita kugadzirwa.
Zvadaro, zviratidzo zviri inotevera rakajairika ndiko, kunyange kana zvikuru dambudziko kudhonza guru raparadza, iri nyore kudhonza rova ??pasi payout, ndiko kuti panewo kutanga pamusoro post-jackpot usingabereki pullback ari mapfupi maawa kushanda.
Mukuwedzera, kune mukuru zviruva kana zvenguva zviruva, asi kwaiva kutanga akadai bhora riri vakanwa kunoitika kutanga, panguva yakaderera ezvinhu, uyewo kusvika bhora pedyo pakutanga kusvikira zvinopesana, kutanga zvikuru pasina kupinda, ndiko kutanga rikauya kuti achidzungaira.
Asi zvakadaro, zvinoita sokuti zvimwe zvinhu chaizvoizvo kuitika, zviri mirawo nokuti kunobva vo pamusoro kuchinja ari mbambo, uye zvose zvinotora nzvimbo nechokwadi kamari ezvinhu apo, vakananga pakatarisana maonero kuti havagoni kuva zvakanaka asi vamwe.